Madaxweyne Qoor Qoor oo gaaray Muddo gaaray Dhuusamareeb (Sawiro)
Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Galmudug mudane Axmed cabdi kaariye Qoor,Qoor oo muddooyinkii Dambe Howlo shaqo u joogay Magaaladda Muqdisho ee caasimada Dalka ayaa dib ugu soo labtay caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb.
Wafdiga madaxweynaha oo ka soo duulay Garoonka Adaan cadde ee muqdisho waxaa Garoonka Diyaradaha ee Caasimadda Galmudug kusoo Dhoweeyay Madaxweyne ku xegeenka Galmudug mudane cali Daahir ciid, Gudoomiyaha Baaramaamka Galmudug, Dr maxamed Nuur Gacal, wasiiro iyo Xildhibaano ka katirsan Galmudug, Maamulka caasimada, iyo Saraakiil Ka katirsan Ciidanka Xoogga Dalka.
Madaxweyne Axmed Cabdi kaaiye Qoor Qoor oo mudo 44 Cishaa ku sugna Magaladda muqdisho iyo Turkiga ayaa ka qeyb galay kulamo Xasaasi ah oo looga arinsanayo Arrimaha Doorashooyinka dalka waxa uuna door Muuqada ku lahaa isku soo dhowowan shaha laga gaaray Arimaha Doorashooyinka.
« Cumar C/rashiid oo weerar Afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo.
Gal-dacwadeedkii C/rashiid janan oo La laalay »